Labaatan kun oo asakri oo shabaab ka saari la’ deegaanada Jubbaland. – Hornafrik Media Network
Cali Mahdi: Mudullood cidna shir uma diidi karto, dalkana waxaa lagu maamulaa nidaam…
Mareykanka oo duqeyn ku dilay maamulihii shirkadda Hormuud ee degmada Jilib
Xildhibaan Jirde: “Farmaajo looma aaneyn karo xasuuqii Maxamed Siyaad uu halkan ka…
DF oo war kasoo saartay khasaaraha ka dhashay duqeyn ka dhacday duleedka Jilib
Labaatan kun oo asakri oo shabaab ka saari la’ deegaanada Jubbaland.
By HornAfrik	 Last updated Aug 18, 2018
Hornafrik-Deegaanada maamulka Jubbaland ee sadexda Gobolka Jubada Hoose Jubada dhexe iyo Gedo Al-shabaab waxaa ka adkaan la’ Ciidamado gaaraya 20,000 oo askari isuguna jira Milatraiga Soomaaliya , Ciidamo u gaar ah Jubbaland , Milatariga Kenya , Ethiopia iyo Burundi.
Ciidamadaasi waxaa ay helaan mushaaraad badan , kuwa Jubbaland waxaa si gaar ah bilkasta lacag dhan 1.5milyan hadaan si kale u dhigno milyan iyo shan boqol kun oo dooolar u siiya dowladda Kenya sida uu sheegay Xildhibaan Faarax Macalin oo hore uga tirsanaa Baarlamaanka Kenya.
“Dowladda Kenya 1.5 milyan oo doolar waxay bilkasta siisaa Maamulka Jubbaland si mushaaraad loogu siiyo 7,000 oo askari oo maamulkaasi leeyahay , waxaa dheer 5500 askari oo ciidanka Difaaca Kenya ah , 4000 oo xooga dalka Soomaaliy ah , 3000 oo ciidamada Itoobiya ah iyo 1000 askari oo Burundian ah dhamaan askartaasi ayaa u jooga si ay meesha uga saaraan 1500 dagaalamayaal Shabaab ah” ayuu qoraal ku yiri Farah Macalin.
Jubbaland deegaanada ay ka koobantahay meelaha waxaa ku sugan Al-shabab , Jubada dhexe gabi ahaan ba A-shabaan ayaa gacanta ku hayaa , jubada hoose na kismaayo iyo Afmadow ayay joogaan ciidamada , inta kale shabaab ayaa ku sugan , Gobolka Gedo ayaa ah halka aysan degmo buuxda kaga sugneyn Al-shabaab marka laga reebo Tuulooyin.
Dhowrka sano ee uu socdo howlgalka Shabaab looga saarayo dalka deeganada Jubbaldn waxay kamid tahay meelaha ugu badan ee ay saraakiishu sheegaan in laga saarayo hadana ma aysan dhicin.
Deg-Deg Qarax gaari oo goordhaw Muqdisho ka dhacay.
Xog-Puntland iyo Soomaaliland oo heshiiyay!